Axmed Macalin Fiqi oo ka digay qorshaha ay dhawaan ku heshiiyeen madaxda dalka (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Macalin Fiqi oo ka digay qorshaha ay dhawaan ku heshiiyeen madaxda dalka (DHAGEYSO)
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka digay qorshaha amniga ku saabsan oo ay dhawaan ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Xildhibaan Axmed Fiqi ayaa sheegay in markii ay daba-gal dheer ku sameeyaan qorshahaan ay ugu dambeyn kusoo ogaadeen in qorshahaan aanay qof Soomaali ah shaqo ku lahayn, balse markiisi hore lagu soo diyaariyay magaalada Nairobi, kadibna lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Addis Ababa.
“Qorshahaan waxaan ogaannay markaan daba-gal tiro badan ku sameeynay, inaanay Soomaaliba shaqo ku laheyn, shalay shir Tanzania kusoo gaba gaboobay ayaa jira, oo ku saabsanaa qorshahaan, hal qof oo Soomaali ah ma fadhin, qorshahaane Nairobi ayuu kasoo bilawday, waxaana lagu soo gaba-gabeeyay guriga safiirka Ingiriiska ee magaalada Addis Ababa, markale xildhibaanada sharafta leh waxaan ka rabnaa in inta shirkaasi aan la gaarin kahor ay soo baxaan wax wasaaradda difaaca ay hormuud ka tahay.” Sidaasi waxaa yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi.
Dhinaca kale, guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalay mooshin u gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya, waxayna mooshinkaasi ku dhaliileen qorshaha ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka.
Qorshahaasi ayaa ah mid lagu soo dhisi doonno 18-kun oo askari, kuwaas oo min 3-kun ka kala imaanaya maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe Soomaaliya.
Ugu dambeyn, baarlamaanka ayaa dib u dhigay xiritaanka kalfdhiga koowaad oo qorshihiisa ahaa in maalintii shalay lasoo xiro, si arrinta ka taagan qorshaha amniga xal loogu helo, waxaana laga dalbaday dowladda in qorshahaan ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiso.